China Precision steel tube စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
ကုသိုလ်ကံ တိကျသောသံမဏိပြွန် / ပိုက်
နိဒါန်း တိကျသောသံမဏိပြွန်သည် အအေးဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပူပူနွေးနွေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တိကျမှုမြင့်မားသော သံမဏိပြွန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။တိကျသောသံမဏိပိုက်များ၏ အတွင်းနှင့် အပြင်နံရံများတွင် အောက်ဆိုဒ်အလွှာမရှိခြင်း၊ ဖိအားမြင့်ပြီး ယိုစိမ့်မှုမရှိခြင်း၊ တိကျမှုမြင့်မားခြင်း၊ ချောမွေ့မှုမြင့်မားခြင်း၊ အေးစက်သောကွေးညွှတ်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ မီးတောက်ခြင်း၊ အပြားလိုက်နှင့် အက်ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့ကို pneumatic သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန် အဓိကအသုံးပြုကြသည်။ ဆလင်ဒါများ သို့မဟုတ် ဆီဆလင်ဒါကဲ့သို့ ချောမွေ့သောပြွန် သို့မဟုတ် ဂဟေဆော်ထားသော ပြွန်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ တိကျသောသံမဏိပိုက်သည် မြင့်မားသောဘက်မြင်တိကျမှုနှင့် မြင့်မားသောအလွှာရှိပြီး၊ ပိုက်၏အတွင်းနှင့်အပြင်မျက်နှာပြင်များသည် အပူကုသမှုပြီးနောက် အောက်ဆိုဒ်ဖလင်မရှိပေ။ပိုက်သည် ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ ကွဲထွက်ကာ ပြားသွားကာ အေးစက်သော ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘဲ ဖွဲ့စည်းထားကာ မြင့်မားသော ဖိအားကို ခံနိုင်ကာ ရှုပ်ထွေးသော ပုံပျက်ခြင်းများနှင့် နက်နဲသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။
1. အပြင်အချင်းက ပိုသေးပါတယ်။
3. အအေးဆွဲပြီးသော ထုတ်ကုန်သည် တိကျပြီး ကောင်းမွန်သော မျက်နှာပြင် အရည်အသွေးရှိသည်။
5. သံမဏိပိုက်၏စွမ်းဆောင်ရည် သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး သတ္တုသည် ပိုသိပ်သည်းသည်။
နံရံအထူ: 1.5mm-30mm, သို့မဟုတ်လိုအပ်သလို။
ပြင်ပအချင်း: 10.3mm-1219mm, သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို။
လျှောက်လွှာ အရည်ပိုက်၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက်၊ ဖိအားမြင့်မားသော ဘွိုင်လာပြွန်၊ ရေနံကွဲအက်မှုအတွက် ချောမွေ့သောပြွန်၊ ပြွန်ပိုက်၊ ငြမ်းပိုက် ဆေးဝါးနှင့် သင်္ဘော၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စသည်တို့။
တိကျသောသံမဏိ Tube စက်ရုံ